21 Aug, 2014 - 00:08	 2014-08-21T08:51:43+00:00 2014-08-21T00:00:51+00:00 0 Views
Munhu asingaratidzike kuchembera anonzi (goremucheche)
Munhu anotumwa nemashoko namambo anonzi (nhume yamambo)
Munhu asingabvarure machira anonzi (muroyi)
Munhu anofambisa mashoko ekupfimbana anonzi (gwevedze)
Munhu anoendesa pfuma yekuroora anonzi (sadombo/munyayi/samutumwa)
Dion Hloniphile Ndlovu ari muForm 3 paMkoba 3 High School, kuGweru akati:
Murume akafirwa nemukadzi anonzi humburukwa. (Ndizvozvo, asi izita risina kunaka uye risina hunhu. Harishandiswe sezvatinoita chirikadzi. Pfunda murume akura asi asina kuroora.)
Akazoti: Chindori chii? (Ndiyo yamunoti rin’i kana kuti mhete)
Gladman Mbiri ari muGrade 7 paChisamba Primary School, kuSakubva, kwaMutare ndokuti:
Ndidetembereiwo mutupo weMbizi. (Ona paPeji 2)
Chiedza Shumba ari muForm 5 paMashoko High School, kuBikita akabvunza kuti:
Nhunzi hadzi inonzi chii muchiShona chaicho? (Rega timbozvitsvaga)
Kudzai Nyamushamba ari muGrade 7 paMasaisai Primary School, kuWestgate, muHarare akati:
Nderipi izwi rinoreva zvakafanana najana? (Vamwe vanoti zoro/dzoro)
Silence Mwaziya uyo ari muGrade 7 Green paDavid Livingstone Primary School, muHarare ndokuti:
Murume akafirwa nemukadzi anonzi pfunda.
Akabvunza kuti: Kona (corner) inonzi chii muchiShona chedu? (Panosangana madziro kana nzira)
Ndevapi vanhu vanoita zvinotevera:
2. Kurova gusvi
3. Kugova nhumbi dzemufi
4. Kutamba chiramu
5. Kugovera vanhu minda mubhuku